Ukuba kukutya okukhawulezayo, iMidlalo yeSky Flate yiKetchapp yeyakho | I-Androidsis
I-Flippy Skate yinto entsha evela kwimidlalo yeKetchapp, Enye yeenkampani ezijongene nenxalenye enkulu yemigangatho ephezulu "yokuhamba" esinayo kwiGoogle Play Store. Ukuzinikela ngokupheleleyo ekuziseni imidlalo esikwaziyo ukuyidla njengenye yezo hamburger ezivela kwezona ndawo zimbini zaziwayo zokutya okukhawulezayo.
Kukho imidlalo emininzi eye yadlula kule migca epapashwe yiMidlalo yeKetchapp. Ngeli xesha kusekwe ekuphatheni kweskateboard esiya kujikeleza ngokungenasiphelo de sicinezele kwiscreen kwaye makhe siphawule i-olie yentsomi. Imidlalo ekhawulezileyo engaqhelekanga apho into ebalulekileyo kukufumana ubuninzi bamanqaku.
1 Ukusetyenziswa ngokukhawuleza
2 Kwi Flippy Skate ngeebhodi ezininzi ukuvula
3 Ngaphandle kwento ebalulekileyo yokwenza i-skateboarding yokwenyani
IFlippy Skate ngumdlalo omtsha "wokutya okukhawulezayo" ovela kwimidlalo yeKetchapp. Sithetha ngokutya okukhawulezayo ngalo mdlalo siya kudla ngokukhawuleza kwaye ngekhe siphinde sizame kwakhona kwimihla yeentsuku. Isusa indlala yethu yokudlala okwethutyana kwaye yenze ukuba isithukutheko sinyamalale kwimizuzu nje embalwa.
Imidlalo yeKetchapp yingcali kuyo, nangona mva nje Uthanda kakhulu ukusizisela amanye amamenyu kunye nezinye iincasa, njengoko kusenzeka kunye neNkosana entsha yasePersi. Nangona singakulibali ICubriko, Ukunyuka kwamatye o Ixesha lesiphelo. IArcades eziqhelekileyo zokusetyenziswa ngokukhawuleza kwaye sihlala sisetyisa kakuhle kwiimeko ezininzi.
Kwi-Flippy Skate sinayo kulula kakhulu ekuqaleni, kuba ubuchwephesha bomdlalo busekwe ekwazini ukucofa isikrini kumzuzu olungileyo apho sinqwenela ukuba i-skateboard iwele kakuhle kuloo umphezulu ogqibeleleyo wale micimbi yokutyibilika. Into enobuqhetseba ivela kwinani lokujika eliya kwenziwa yitafile ngokuxhomekeke kubude obuphumeleleyo ngokutsiba kwethu.
Kwi Flippy Skate ngeebhodi ezininzi ukuvula
Akunakuphoswa kumdlalo wale ndlela, kwi-freemium ecocekileyo, amandla okuvula umxholo omtsha onokwandisa ubomi beFlippy Skate. Siza kufumana iitafile ezintsha ezinemizobo eyahlukeneyo kunye noyilo ngeerubhi esiza kuzifumana njengoko sinako ukufezekisa izinto ezahlukeneyo. Ngokupheleleyo kuya kubakho malunga neebhodi zokutyibilika ezingama-20 eziyilo ezahlukeneyo esiza kuzifumana kumdlalo omtsha opapashwe yiMidlalo yeKetchapp.
Mhlawumbi uyalazi elo nani kancinci, kuba kulungiselelwe ukuba ngomdlalo nje omncinci singabafumana bonke, nangona siza kuhlala sidinga ixesha lethu kunye nesakhono ukuze sikwazi ukuhambelana neskateboard. Into esiyiphosileyo kukuba akusekho zakhiwo kwaye kuhlala kubonakala ngathi yindawo enye. Ngapha koko, siqhelene neMidlalo yeKetchapp thumela imidlalo oyiphosileyo ukuba kukho umxholo ongaphezulu.
Ngaphandle kwento ebalulekileyo yokwenza i-skateboarding yokwenyani
Oko kusishiya singaqhelekanga kukuba khange kwenzeke ukubamba isiseko esicocekileyo se-skateboarding. Kulungile, sinetafile, olo tshintsho, kodwa asinazindlela zokuqhuba kwaye besifuna ukuhamba ngokulula yemidlalo yasesitalatweni apho besisoloko sibona izakhono ezininzi kwicala labo bazenzayo. Kwaye sineentlobo ngeentlobo zemidlalo yebhotibhodi, njengolu luhlu, okanye ezinye ezininzi ezenzekileyo kule migca kwi Androidsis.
Ngokobuchwephesha I-Flippy Skate ngumdlalo okhusela kakhulu, kuba isekwe nje kukujikeleza kwesikeyiti nakwifizikiki eyenziweyo ukwenzela ukuba konke ukuwa kuvele. Isitayile esihle esibonakalayo, into edla ngokubonisa imidlalo yeKetchapp kunye nento enexabiso: ukukhawuleza xa kufikwa kumba wokudlala ngqo umdlalo.
I-Flippy Skate yinto engaqhelekanga engayi kuhla kwimbali yomdlalo wevidiyo, kodwa oko kuya kuba nakho ukonwabisa uze udlulele kwiKetchapp elandelayo engaqhelekanga okanye olunye uthotho lwezifundo ezinikezelwe kolu hlobo lwemidlalo ekhawulezayo.
Ngqo ukudlala ngaphandle kokuchitha naliphi na ixesha
Ayinayo nevidiyo yentengiso yokusenza sonwabe?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » I-Flippy Skate yinto entsha engaqhelekanga evela kwiMidlalo yeKetchapp ukuyitya kwi-jiffy